Amazon dochie akara ngwa ya iji mee ka ọ dị ka Hitler | Gam akporosis
Amazon dochie akara ngosi ngwa ya iji mee ka ọ ghara ịdị ka Hitler
Amazon dochie kpochapụwo ngwa logo Jenụwarị gara aga, gosipụtara akara ngosi gosipụtara igbe nke ụlọ ọrụ ahụ na-eji ezigara ngwugwu ya, ya na ọnụ ọchị na akara na-acha anụnụ anụnụ nke na-eme ka teepu ahụ mechie igbe ndị ahụ. Nke a na teepu gosiri a jagged imecha na ngwa ngwa hụrụ retractor.
Dị ka ụfọdụ ndị ọrụ, imecha nke teepu nwere ụfọdụ yiri afụ ọnụ nke onye ọchịchị aka ike Nazi Adolf Hitler. Iji zere enyo, na ikpe ọ bụla (na United States na ha gbara akwụkwọ maka ihe ọ bụla) site na Amazon ha megharịrị akara ngosi ngwa iji mee ka ntụnye ọ bụla banyere Hitler pụọ.
Na onyonyo nke n’edemede edemede a, anyi nwere ike ihu, n’aka ekpe, akara eji megharia ngwa a na onwa Jenụwarị, na n’aka nri, akara ahu anyi nwere ike ichota na ngwa a. Ọ bụrụ na anyị maara ihu Hitler, ọ bụrụ na anyị elee anya, ọ bụrụ na ọ dị ka nwere myirịta ụfọdụ ya na afụ ọnụ ya, mana ị ga-eji ọtụtụ echiche.
Onye nkwuchite Amzon kwuru si na Verge:
Amazon na-enyocha mgbe niile ụzọ ọhụrụ iji mee ndị ahịa anyị obi ụtọ. Anyị mere akara ngosi ọhụụ iji mee ka atụmanya, obi ụtọ na ọ joyụ mgbe ndị ahịa malitere njem ịzụ ahịa na ekwentị ha, dịka mgbe ha hụrụ igbe anyị n'ọnụ ụzọ ha.
Tupu ụdị afụ ọnụ a nakweere Hitler, nke a ghọrọ ewu ewu na mmalite narị afọ nke XNUMX, nke kachasị site na ndị na-atọ ọchị dị ka Charlie Chaplin. Akara Amazon gara aga gosipụtara nkata nwere ederede Amazon, akara ngosi nke mere ka anyị mata ngwa ngwa, ọ bụghị dị ka akara ngosi dị ugbu a, ruo mgbe ị matara na edochila akara ngosi ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Amazon dochie akara ngosi ngwa ya iji mee ka ọ ghara ịdị ka Hitler
Otu esi emepụta ndepụta ọnụahịa maka azụmahịa gị na QR code na-enweghị ebe nrụọrụ weebụ